कांग्रेस बैठकमा ८ नेताले के भने ? नरहरिले भने-वामलाई काउन्टर पुगेन
काठमाडौँ, ११ चैत । कांग्रेसको चुनावी समीक्षा बैठकको दोस्रो दिन शनिबार गुटगत आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरू नेतृत्वको बचाउमा देखिए भने रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष आलोचनामा उत्रिए ।
स्थानीय तह, प्रदेशदेखि केन्द्रको निर्वाचनमा पार्टी कमजोर बन्नुमा सभापतिको विधानविपरीतका काम, कमजोर रणनीति, सरकार सञ्चालन गर्दा भएको कमजोरीलाई असन्तुष्ट पक्षले कारण देखाएको छ । तर, हरेक निर्णयमा साक्षी बनेकाहरू नै अहिले नेतृत्वलाई दोष दिन अग्रसर देखिएको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका छन् । शनिबार आठ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखे ।
झगडा बैठकमै गरौँः हरि नेपाल
पार्टीले हारेको छ, हारको दोष सभापतिलाई मात्रै नदिऊँ । हामी सबैबाट गल्ती भएका छन् । सबैले गल्ती स्विकार्दै आफूभित्रै सच्चिएर जाँदा राम्रो बन्न सक्छौँ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, झगडा गर्ने, तर्क र विवाद गर्ने, पार्टीको फोरममै गरौँ । बाहिर गएर एकले अर्कालाई दोष देखाएर पार्टी कमजोर नबनाऔँ । झगडा गरौँ, तर भित्रै गरौँ । यो बैठकबाट निस्कँदा तुस बाँकी नराखौँ ।
दोषी सभापति नै होः नवीन्द्रराज जोशी
निर्वाचनअघि गठन गरिएका कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड खारेज गरेर विधानसम्मत अर्को समिति बनाऔँ । विधानसम्मत पार्टी चलाउने भए धेरै समस्या समाधान भएर जान्छन् । हाम्रा सभापति बाहिरकालाई मिलाउन सक्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्र मिलाउन सक्नुहन्न किन ? तपाईंहरू पार्टीभित्रचाहिँ कहिले मिल्नुहुन्छ ? त्यसैले निर्वाचनमा पार्टी कमजोर बन्नुको दोष सभापतिलाई जान्छ ।
खोजेपछि दोषी भेटिन्छन्ः दिलेन्द्र बडू
हामी निर्वाचनमा यसपटक धेरै कमजोर भयौँ । यो कमजोरीलाई हटाउन हामी कसरी पछि प¥यौँ भन्ने जान्न र बुझ्न आवश्यक छ । दोष खोजेपछि दोषी फेला पर्छन्, अनि दोष के–के हुन् ? कमजोरी केलाएर दोषी पत्ता लगाउन सकिन्छ । निर्वाचनमा वामहरूको मोर्चा बनेपछि हामीले पनि प्रभावकारी रूपमा लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउनुपथ्र्यो । तर, सकेनौँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिमा खबर छ ।